RABENARIVO Sahondra CSI - Mila fomba fiasa vaovao sy toe-tsaina ny ady amin'ny kolikoly - Taratra du 14 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité RABENARIVO Sahondra CSI – Mila fomba fiasa vaovao sy toe-tsaina ny ady...
«Tsy mora ny ady amin’ny kolikoly nefa tsy maintsy manomboka sy manangana zavatra vaovao isika rehetra. Mandray anjara sy miara-miasa avokoa ny rehetra handresy izany ary hanatsara ny fari-piainantsika na eo amin’ny toekarena na ny fiainana ankapobeny… Misy toe-tsaina tokony hiova koa anefa avy amintsika», hoy ny filohan’ny CSI, Rabenarivo Sahondra, tao amin’ny radio Alliance 92 FM sy ny Taratra FM 106.2, omaly. Nambarany fa manana fahavononana amin’ity ady ity ny filoham-pirenena ka tokony ho vita ny hitarihana izany. Tanterahina ao anaty fomba fiasa vaovao sy mavitrika kokoa no ho ny teo aloha izany, araka ny nambarany… Notsiahiviny fa efa misy ny paikady hiadiana amin’ny kolikoly. Ilaina koa anefa ny anaovana tombana hijerena ny mety sy tsy mety ary ampiarahana amin’ny IEM izany.
Hitodika amin’ny fanentanana fa tsy fanagadrana…
Eo koa ny vina hitodika amin’ny fanentanana fa tsy fanenjehana na fanagadrana amin’ity ady amin’ny kolikoly ity. « Hojerena ny fitantanan-draharaham-panjakana. Hatsaraina ary hazava kokoa amin’ny vahoaka ny fepetra raha hanao taratasy amin’ny fananan-tany, ohatra. Hahena ny mety hidiran’ny fanararaotana kolikoly amin’ny asam-panjakana… Tokony hohafainganina izany sady efa ao anatin’ny IEM ny fametrahana sampana eny anivon’ny minisitera, hijery ny hirika mety hidiran’ny kolikoly », hoy ny filohan’ny CSI. Na izany aza anefa, nambarany fa tsy mitovy izany eny amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, na Fahasalamana, Fanabezana na Fananan-tany. Noraisiny ho ohatra ny tokony hahafantaran’ny mpila raharaha eny amin’ny biraom- panjakana ny fe-potoana hamoahana antontan-taratasy iray raha tsy voahaja hatrany izany teo aloha.
Sarotra ny manova ny fomba fiasan’ny mpiasam-panjakana
… Nanteriny fa mora kokoa ny mandany lalàna sy mametraka birao na rafitra no ho ny manova ny fomba fiasan’ny mpiasam- panjakana… Notsiahiviny koa mila finiavana politika ny ady amin’ny kolikoly raha ny niatrehana izany tao anatin’ny 15 taona. Eo koa ny vola ary ny fanomezana fahefana mba tsy zary ambony latabatra fotsiny ity ady ity… «Efa nitombo ny tetibolan’ireo rafitra misahana izany ady izany ka mba hanao ny asany soa aman-tsara izy ireo… Hitodika kokoa amin’ny fitantanan-draharaham- panjakana manokana izahay.. Mila miova toe-tsaina koa anefa isika efa zatra resaka kolikoly. Zatra ny namana na fianakaviana ary ny kiantranoantrano. Tokony hitovy zo avokoa ny rehetra eo anatrehan’ny asam-panjakana.. Tsy maintsy jerena ny anton’ny kolikoly sy ny fanafodiny… Tsy hoe mpiasam-pankana ihany ny tokony hiova fa isika rehetra mihitsy koa», hoy izy.
Mbola komity mpandrindra ny baolina kitra…
Nitodika amin’ny fiarahamonim-pirenena namany Rabenarivo Sahondra avy eo ka nilaza fa tokony hanampy ny olona manoloana ny asam-panjakana koa izy ireny. « Antenaina fa hisy fiovana ny ady amin’ny kolikoly fa tsy ho tahaka ny teo aloha intsony », hoy izy.
Tsiahivina fa mbola eo anivon’ny komity mpandrindra ny baolina kitra ny tenany. Tsy mifanalavitra amin’ny asany eny amin’ny CSI ihany ny eo anivon’io komity io. « Tsy haharitra ela rahateo aho ao. Efa noresahina tamin’ny filoham-pirenena sy ny Fifa izany ary samy nanaiky izy ireo ka mbola manohy izany asa amin’ny maha komitin’ny baolina kitra izany aho », hoy ny filohan’ny CSI.
Article suivantPrescription – Fivarotana zaridaina eny analamahitsy – Ahina tsy ho afa-bela koa ry Lalaina Berthnès – Taratra du 14 mars 2019